GARMIN ရေကြောင်းအပေါ်မြေပုံများအားကို UPDATE လုပ်နည်း - ရေကြောင်း - 2019
အဆိုပါရေကြောင်းမှတ်ဥာဏ်အသစ်ပြမြေပုံများကိုဒေါင်းလုဒ် - လစဉ်လတိုင်းထွက်ရှိသောမှာအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်ခြောက်လပိုမကြာခဏဖျော်ဖြေနှင့်သင့်ကြောင်းတစ်မျှမျှတတရိုးရှင်းတဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်း။ ဒေါင်းလုဒ်မြန်နှုန်းသင့်ရဲ့အင်တာနက် bandwidth ပေါ်တွင်မူတည်ပါသည်ဒါကြောင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမြေပုံများ, အတော်လေးကြီးမားကြသည်ကိုသတိပြုပါ။ ထို့အပြင် internal memory ကိုအမြဲတမ်းအလုံအလောက်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်တစ်ဦးခရီးသွားနေတယ်ဆိုရင်, သင်သည်မည်သည့်အရွယ်အစား၏မြေပြင်အနေအထားနှင့်အတူဖိုင်တစ်ခုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်ဘယ်မှာ SD က-ကဒ်ရ။
Garmin Navigator သို့မဟုတ်ကနေတစ်ဦးမှတ်ဉာဏ်ကဒ်;
Method ကို 1: တရားဝင်လျှောက်လွှာ
ဒါဟာမြေပုံ update လုပ်ဖို့လုံးဝလုံခြုံလွယ်ကူနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအခမဲ့မဟုတ်ပါဘူးနှင့်အပြည့်အဝလည်ပတ်, သက်ဆိုင်ရာမြေပုံ၏ပြဌာန်းချက်အဘို့နှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုမှအယူခံနိုင်စွမ်းပေးဆောင်ရပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဦး Garmin အတွက်တစ်သက်တာအဖွဲ့ဝင်များနှင့်တဦးတည်းအချိန်အခကြေးငွေ: ဒါဟာဝယ်ယူ2မျိုးရှိပါတယ်ကြောင်းမှတ်သားရပါမည်။ ပထမဦးဆုံးအမှု၌, သင်ရုံတစျခု update ကိုများနှင့်အတိအကျတူညီသောလမ်းကိုဝယ်ခြင်းငှါအသီးအသီးနောက်ဆက်တွဲလိုအပ်ချက်အရတစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်အခမဲ့ updates များကို၎င်း, ဒုတိယရ။ သဘာဝကျကျ, မြေပုံ update လုပ်ဖို့နိုင်ရန်အတွက်ပြုလုပ်ပထမဦးဆုံးတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်ပေသည်။
အဆိုပါ Garmin တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားရန်
Garmin Express ကို program ကို download လုပ်ပါ။ အဓိကစာမျက်နှာတွင် select လုပ်ပါ "Windows အတွက် Download လုပ်" သို့မဟုတ် "Mac အတွက် Download လုပ်"သင့်ကွန်ပျူတာ၏ operating system ကိုပေါ် မူတည်. ။
အဆိုပါဖြန့်ဖြူးဖို့အဆိုအရဖွင့်ပါနဲ့လျှောက်လွှာကို install ဒေါင်းလုပ်ပြီးဆုံးခဲ့သည်။ ပထမဦးစွာသင်အသုံးပြုသူသဘောတူညီချက်ကိုလက်ခံရပေမည်။
installation လုပ်ငန်းစဉ်ကို၏အဆုံးမှ forward ။
လျှောက်လွှာကို run ။
သစ်ကိုပြတင်းပေါက်များတွင်လျှောက်လွှာ option ကို select လုပ်ပါ "တစ်ဦး Device ကို Add".
သင့်ရဲ့ device ကိုသို့မဟုတ်မှတ်ဉာဏ်ကဒ်တစ်ဦးကို PC ချိတ်ဆက်ပါ။
သင်သည်သင်၏ device ကိုချိတ်ဆက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်သင်ကမှတ်ပုံတင်ရန်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ GPS စနစ်ထောက်လှမ်းစာနယ်ဇင်းပြီးနောက် "တစ်ဦး Device ကို Add".
နောက်ဆုံးသတင်းများအဘို့အစစ်ဆေးနေ Start ကြောင့်အဆုံးသတ်ဘို့စောင့်ပါ။
ကဒ် update ကိုအတူသင်ဆော့ဖ်ဝဲဗားရှင်းအသစ်အပေါ်ကိုသွားဖို့တောင်းနိုင်ပါသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့အကြံပြု "အားလုံး Set".
ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းကတော့ရေကြောင်းမှအပေါ်ကို install ပါလိမ့်မည်။
ထိုအခါအတူတူပါပဲကဒ်နှင့်အတူဖြစ်ပျက်ပါလိမ့်မယ်။ ထုတ်ကုန်ရဲ့ internal memory ပေါ်မှာနေရာမလုံလောက်မပါလျှင်သို့သော်, သင်မှတ်ဉာဏ်ကဒ်ချိတ်ဆက်ဖို့သတိပေးခံရလိမ့်မည်။
Garmin Express ကို, ကို install အသစ်ဖိုင်များကိုမရှိခြင်းအကြောင်းကြားဖယ်ရှား, သို့မဟုတ် SD-GPS စနစ် Drive ကိုလိမ့်မယ်ပြီးတာနဲ့။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ထဲမှာအဆုံးသတ်စဉ်းစားသည်။
Method ကို 2: တတိယပါတီသတင်းရပ်ကွက်များ
အလွတ်သဘောအရင်းအမြစ်များကိုအသုံးပြုခြင်း, သငျသညျအခမဲ့အဘို့သင့်ကိုယ်ပိုင်ဓလေ့ထုံးစံနဲ့လမ်းပေါ်မှာပြမြေပုံများတင်သွင်းနိုင်သည်။ အဆိုပါစိတ်အားထက်သန်မှုအပေါ်နှငျ့သငျကတ်တစ်ကတ်ကိုရှေးခယျြတကြိမ်အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက် built အားလုံးခေတ်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးခံရဖို့ငြိမ်းစေခြင်းငှါ - ဒီ option ကို 100% ဘေးကင်းလုံခြုံမှု, သင့်လျော်သောလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်ဆီလျော်မှုအာမမခံကြောင်းမှတ်သားရပါမည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, နည်းပညာပံ့ပိုးမှုထိုကဲ့သို့သောဖိုင်တွေအတွက်စေ့စပ်သည်မဟုတ်, ဒါကြောင့်သာဖန်ဆင်းရှင်မှအဆက်အသွယ်ရှိသည်, ဒါပေမယ့်သူ့အဘို့မဆိုအဖြေကိုစောင့်ဆိုင်းနိုင်ခြေမရှိပေ။ တဦးတည်းလူကြိုက်များဝန်ဆောင်မှုသူ့ရဲ့စံနမူနာအနေဖြင့်, OpenStreetMap နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးစဉ်းစားပါ။
အပြည့်အဝအကြောင်းမူကား, အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုသိရန်လိုအပ်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ရန် အားလုံးသတင်းအချက်အလက်ကပေါ် OpenStreetMap မှတင်သွင်းခဲ့ပါသည်။
အပေါ်ကလင့်ခ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါနှင့်အခြားအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးမြေပုံများ၏စာရင်းထွက်စစ်ဆေးပါ။ Sorting ထို့နောက်ဖော်ပြချက်နှင့် Refresh Rate ကိုဖတ်ပါ, လယ်ပြင်ပေါ်ထွက်ယူသွားတတ်၏။
လိုချင်သော option ကို Select လုပ်ပါနှင့်ဒုတိယကော်လံတွင်ပေးထားသောလင့်ခ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ multiple ဗားရှင်းလျှင်, နောက်ဆုံးပေါ် download လုပ်ပါ။
အမည်ပြောင်းရန်ဖိုင်ကိုချွေပြီးနောက် gmapsuppချဲ့ထွင်မှု .img မပြောင်းဘူး။ ကြောင်းတစ်ဦးထက်ပို GPS စနစ် Garmin အများဆုံးထိုကဲ့သို့သောဖိုင်တွေမဖွစျနိုငျသတိပြုပါ။ အချို့သာလျှင်သစ်ကိုမော်ဒယ်များအတော်ကြာ IMG ၏သိုလှောင်မှုထောက်ခံပါတယ်။
USB ကနေတဆင့်သင့်ရဲ့ PC ကိုရန်သင့် device ကိုချိတ်ဆက်ပါ။ သင်က device ကိုစုံစမ်းသိရှိလာပါတယ်တဲ့အခါမှာအလိုအလျှောက် run ကြောင်း Express ကိုလျှောက်လွှာကို install ပါကပိတ်ပါ။
အဆိုပါ SD က-ကဒ်၏ရှေ့တော်၌, file တွေကို download လုပ်ပါကတ်စာဖတ်သူသို့ adapter ကနေတဆင့် drive ကိုချိတ်ဆက်ဖို့သုံးပါ။
အညွှန်း mode ကို Turn "ကို USB Mass သိုလှောင်", သင်ကကွန်ပျူတာတွေနဲ့ဖိုင်တွေဝေမျှခွင့်ပြုသည်။ မော်ဒယ်ပေါ် မူတည်. ဒီ mode ကိုအလိုအလျှောက် activated နိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော, ဖြစ်ပျက်သည့်ဂျီပီအက်စ်ကိုဖွင့်မီနူးကိုရှေးခယျြမပါဘူးဆိုရင် "Settings" ကို > "Interface ကို" > "ကို USB Mass သိုလှောင်".
ဖြတ်. "My Computer ကို" device ကိုဖွင့်နှင့်ဖိုင်တွဲကိုသွား "Garmin" သို့မဟုတ် "မြေပုံ"။ (သာ 1xxx မော်ဒယ်များများအတွက်နေရာလေးကို) မျှဖိုလ်ဒါရှိပါတယ်ရှိလျှင်, ဖိုင်တွဲတစ်ခုဖန်တီး "မြေပုံ" ကိုယ်တိုင်။
ကူးယူပြီးနောက်, ရေကြောင်းသို့မဟုတ်မှတ်ဉာဏ်ကဒ် disconnect ။
အဆိုပါ GPS စနစ် enabled အခါကတ်ပြန်လည်ချိတ်ဆက်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ကိုသွား "ဝန်ဆောင်မှု" > "Settings" ကို > "မြေပုံ" > "အဆင့်မြင့်"။ လာမယ့်သစ်ကိုကဒ်ရန်အကွက်ကိုစစ်ဆေးပါ။ အဟောင်းကိုကဒ်ပါလျှင်, သို့သော်, ကို tick ဖယ်ရှားပစ်ရန်သတိရ, တက်ကြွနေဆဲဖြစ်သည်။
အဆိုပါ OSM မှာ CIS နိုင်ငံများနှင့် Garmin သိုလှောင်မှုကဒ်၏ပြည်တွင်းဖြန့်ဖြူးပေးသီးခြား dedicated server ရှိပါတယ်။ တပ်ဆင်၏နိယာမအထက်တွင်ဖော်ပြထားကြောင်းနှင့်ဆင်တူသည်။
OSM-မြေပုံ CIS ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် Go
အဆိုပါ readme.txt ဖိုင်အသုံးပြုခြင်း, သင်ယခင်ဆိုဗီယက်ယူနီယံသို့မဟုတ်ရုရှားဖက်ဒရယ်ခရိုင်အတွင်းတပ်မက်လိုချင်သောတိုင်းပြည် archive ရဲ့နာမကိုအမှီရှာတွေ့, ပြီးတော့သူက download လုပ်ပြီး install ပါလိမ့်မယ်။
ဒါဟာချက်ချင်းကိရိယာ၏ဘက်ထရီကိုအားသွင်းခြင်းနှင့်သွားလာမှုအတွက် updates တွေကိုစစ်ဆေးဖို့အကြံပြုသည်။ သင့်ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုခံစားကြည့်ပါ!
ဗီဒီယို Watch: 15 Minutes of Garmin Panoptix Livescope (စက်တင်ဘာလ 2019).